Xisbiyadda Somaliland Iyo Beesha Caalamka Oo Kulan Ballaadhan Ku Yeeshay Magaalada Hargeysa – somalilandtoday.com
(SLT-Hargeysa)-Madaxda saddexda xisbi ee Somaliland WADDANI, UCID iyo Kulmiye iyo Sagaal ka mid ah wakiillada Beesha Caalamka ayaa kulan balaadhan ku yeeshay magaalada Hargeysa. Kulankan oo dhawr saacdood qaatay ayaa ka qabsoomay Hotel-ka Ambasador ee magaalada Hargeysa.
Kulanka waxa xisbiga WADDANI ku metelayay Guddoomiyaha ku meel gaadhka ah Mudane Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, hoggaamiyaha xisbiga Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xoghayaha gaarka ah Mudane Cabdiqaadir Iidle.
Hoggaamiyaha xisbiga WADDANI Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa qoraal uu ka hadlayo kulankii iyo arrimaha lagaga hadlay oo ku baahiyay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu dhignaa sida tan:
“Waxa aanu kulan Saacado badan qaatay kula yeelanay Hotel Ambassador Wafti ballaadhan oo ka socda Beesha Caalamka oo ay metelayeen Wakiilo ka socda Safaaradaha Finland, Sweden, Germany, Denmark, Netherlands, Midowga Yurub, Xafiiska Ingiriiska ee Hargaysa iyo Xubno kale.
Waxa aanu kulankan si qoto dheer ugu lafo-gurnay Hannaanka qabsoomidda Doorashooyinka isku sidkan ee Goleyaasha Deegaanka iyo Wakiilada iyo sidii loo dardargelin lahaa. Waxa kale oo aanu kaga arinsannay sidii Dhalinyarada iyo Haweenka looga qaybgelin lahaa Doorashooyinka foodda inagu soo haya iyo sidii kor loogu qaadi lahaa metelaadda Siyaasadda ee Beelaha la hayb sooco.”